Andao hiresaka momba ny iPad Mini 2: efijery, mpanodina, Touch ID | Vaovao IPhone
Andao hiresaka momba ny iPad Mini 2: efijery, mpanodina, Touch ID
Amin'ny talata 22 dia hamela fisalasalana isika. Io andro io dia hanehoan'i Apple amintsika ny iPad Mini sy iPad Retina nohavaozina. Na eo aza ny zava-misy fa toa voalaza daholo ny zava-drehetra, dia mijanona mifanohitra ny tsaho momba ny takelaka kelin'i Apple. Ny vaovao momba ny iPad misy fampisehoana Retina dia mora hita toy ny iPad Mini raha tsy misy azy. Miaraka amina endrika izay toa tsy azo antoka, fampisehoana, fikirakirana ary ID Touch Ireo fiasa izay eny amin'ny rivotra, ary ireo izay mety hahatonga ny iPad Mini ho baomba na handiso fanantenana. Handinika an-tsipiriany ny tsirairay amin'ireo toetra ireo isika.
1 Retina fampisehoana, tena ilaina
2 Mpandrindra amin'ny taranaka ho avy?
3 ID mikasika, ilaina amin'ny takelaka?
4 Hanohy ho fitaovana "Low Cost" ve ny iPad Mini?
Retina fampisehoana, tena ilaina
Heveriko fa toy ny maro an'isa aho raha manome toky an'izany iPad Mini tsy misy fampisehoana Retina dia ho diso fanantenana tanteraka. Tamin'ny taon-dasa tamin'ny fanombohana azy dia efa nisy resabe tamin'ny fanapahan-kevitr'i Apple hampiasa efijery vahaolana ambany, na eo aza ny fahombiazan'ny iPad Mini. Fa herintaona taty aoriana dia tsy maintsy miova ny toe-javatra, satria ny fifaninanana efa nanome fanapahan-kevitra avo kokoa ho an'ny takelaka "mini", ary Apple dia tsy azo avela mandritra ny herintaona. Noho izany rehetra izany, heveriko fa filokana azo antoka ny efijery Retina, ary na dia tsy maintsy nanome hateviny kely kokoa aza ilay fitaovana dia afaka mankafy efijery mifanaraka amin'ny andrasana isika.
Mpandrindra amin'ny taranaka ho avy?
Ny iPad Mini amin'izao fotoana izao dia mampiasa processeur A5, avy amina taranaka alohan'ny an'ny fitaovana amin'ny taona fanombohana ihany. Ny iPad Retina 4, izay navoaka miaraka, dia mampiasa A6x, fanatsarana ny processeur A6 ao amin'ny iPhone 5. Ny iPhone 5S vaovao dia mampiasa processeur A7, ka hoy ny lojika fa ny iPad Retina 5 dia hampiasa A7X, na Well an A7, satria ny fanatsarana ny processeur dia lehibe tokoa raha oharina amin'ny taranaka teo aloha ka mety tsy hanana olana amin'ny fikirakirana efijery Retina. Ary ny iPad Mini 2?
Ny lojika dia hanondro fa hitsambikina amin'ny processeur A6 izy, tsara kokoa noho ny A5X an'ny iPad Retina tany am-boalohany, saingy ratsy kokoa noho ny A6X an'ny iPad Retina 4. Tadidio fa ny iray amin'ireo antony nahatonga ny iPad Retina "maika" 4 dia ny processeur A5X an'ny iPad Retina 3 tsy nahomby tamin'ny fampisehoana Retina. Ny fehiny dia, Raha manana fampisehoana Retina ny iPad Mini 2 dia tokony hanana farafaharatsiny ny processeur A6X, na iza no mahalala raha hanapa-kevitra ny hanao ny takelaka takelaka ho fitaovana "Top" i Apple ary hanome azy ny processeur A7, miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanjifana bateria izay midika izany. Ny tsaho farany dia manome toky fa misy iPad Retina 5 miaraka amin'ny processeur A7X ary iPad Mini 2 miaraka amin'ny A7, izay tsy ho ratsy mihintsy.
ID mikasika, ilaina amin'ny takelaka?
Ny zava-baovao ao amin'ny iPhone 5s, ary iray amin'ireo mampiady hevitra indrindra. Ny teknolojia Touch ID dia mamela anao hamaha ny fitaovanao amin'ny dian-tànanao, ary mitovy amin'izany hividianana rindranasa amin'ny App Store. Tsy isalasalana fa ireo no fiasa izay ilaina amin'ny takelaka, mamela ny mety hisian'ny aza manomboka fivoriana asa samy hafa miankina amin'ny hoe iza no mamoha ilay fitaovana, zavatra efa nofinofisin'ny mpampiasa iPad hatry ny ela. Ho hitantsika amin'ny iPad ve izany?
Rehefa mandefa fampiasa vaovao i Apple, dia mazàna manome izany ho an'ny fitaovana rehetra nanomboka tamin'io fotoana io. Izany no nitranga tamin'i Siri, ohatra. Mety ho fihetsika hafahafa izany raha tsy manome an'io fiasa io amin'ny iPad Retina 5 i Apple, fa ahoana kosa ny iPad Mini? Toa izany ity asa ity dia mifamatotra amin'ny processeur A7Ka raha manapa-kevitra ny hampita ny iPad Mini amin'ny processeur A6 / A6X i Apple, dia afaka manao veloma ny Touch ID isika.
Hanohy ho fitaovana "Low Cost" ve ny iPad Mini?
Mazava fa ny fanontaniana dia hoe raha Apple te hitazona ny iPad Mini ho fitaovana mora vidy kokoa, ho an'ireo izay maniry fitaovana manana fifandraisana mifandanja kokoa eo amin'ny vidiny sy ny fahombiazany, na raha te hampiakatra azy amin'ny sokajy "TOP Device ", mitovy amin'ny Retina iPad fa manana habe kely kokoa. mazava ny vidin'ny fitaovana dia miankina betsaka aminy ihany koa. Inona no tianao?
Fampahalalana bebe kokoa - Araho ny hetsika Apple amin'ny 22 Oktobra mivantana amin'ny iPad News
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Andao hiresaka momba ny iPad Mini 2: efijery, mpanodina, Touch ID
karlos_1984 dia hoy izy:
lohahevitra sarotra io.
Mino aho fa ny fahombiazan'ny mini dia miankina amin'ny vidiny kokoa noho ny habeny, fa mety hoe rehefa ampidirina an-tsena io habe io dia ampitomboy ny tombony ary tsy fiasco ny vidiny
Mamaly an'i karlos_1984
Ny fametrahana efijery retina sy ny sensor sensor dia tena ilaina amin'ny tsipika tokana, noho izany dia tian'ny Apple ny hanome antsika ny zava-drehetra miaraka amina dropper, amin'ity taona ity ny efijery retina ary ho an'ilay iray miaraka amin'ny sensor.
Ny iPhone 5c, tena tsy fahombiazan'ny Apple?
Io ilay antsoin'ny mpiasan'ny Apple hoe iPhone miloko champagne